Ihe ị ga-ahụ na Huelva | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | General, Huelva
Mpaghara Huelva bụ ebe anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ntụrụndụ na ebe a ga-ahuta. Mara amara maka oke osimiri ya, ebe a, anyị na-ahụkwa obodo na obodo ndị mere eme nke amaara nke ọma maka ọtụtụ ebumnuche. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji hụ ihe niile ị ga-efu ma ọ bụrụ na ịgaghị ileta Huelva.
En Huelva anyị nwere ugwu na anyị nwere osimiri, obere obodo na obodo. Dị ka ọtụtụ ógbè ndị ọzọ, ọ na-esiri ike ịme ndepụta nke ịchọta ihe niile a pụrụ ịhụ, mana anyị ga-etinye ụfọdụ n'ime ebe ndị yiri ka ọ dị mkpa iji hụ Huelva.
1 Obodo Huelva
2 Osisi oke ala
4 Almonaster na Real
5 Doñana ogige ntụrụndụ
Otu n'ime ihe ị ga-eme bụ ịga obodo Huelva. Na Huelva isi obodo anyị nwere ike ịga na Plaza de las Monjas ịhụ ihe oyiyi nke Columbus na-a aụ ihe ọ barsụ drinkụ na mmanya na square na-agafe agafe. Na Huelva anyị na-ahụkwa katidral, nke bụ ụka nke ndị mọnk Merced site na narị afọ nke XNUMX. On ya facade anyị na-ahụ doro anya Baroque ịke ma n'ime ya pụta ìhè Renaissance na colonial metụrụ. Na mpaghara Reina Victoria, anyị nwere ike ịhụ ụlọ ụfọdụ pụrụ iche nke e wuru n'ụdị a ma ama nke Bekee, nke ụlọ ọrụ Bekee mepụtara ihe karịrị otu narị afọ gara aga. El Muelle del Tinto bụ ọmarịcha ọrụ mmepụta ihe nke ụlọ ọrụ injinịa nke zuru oke maka ịgagharị. N'akụkụ nnukwu isi obodo ahụ, anyị nwere ike ịhụ Marismas del Odiel, mmiri mmiri kwuru na ebe nchekwa biosphere.
Osisi oke ala
Ọnụ ọgụgụ a bụ akụkụ nke Utezọ nke Ebe Columbian nke Huelva ekwuputala ya dịka ihe bu ihe nchọpụta nke nchọpụta America. Nwere ike ịme njem a site na obodo ahụ ebe ụgbọ mmiri ahụ ebe a rụrụ caravel La Pinta, na-agafe na square nke ụka San Jorge ebe a na-agụ Royal Pragmatic nke ndị Katọlik Katọlik, na-enye iwu caravel abụọ ka ha bụrụ iwu Columbus Na chọọchị a, ndị ọrụ ahụ niile kpekwara ekpere tupu ha ahapụ ihe amaghi ama. Nwekwara ike ịga na ụlọ nke Pinzón ezinụlọ, nke taa bụ ihe ngosi nka.
Niebla bụ ebe akụkọ ihe mere eme na ndị Finishia achọpụtala. Ndị a na-apụ apụ maka ịnwe mgbidi Arab nke na-adịgide. Na Churchka St. Martin bụbu ụlọ nzukọ nke anyi nwere ike ihu na apse. E nwekwara ike ịhụ akwa mmiri ndị Rom gafere n’elu osimiri Tinto. N'ikpeazụ, ị ga-agafe Castillo de los Guzmanes, bụ nke ala ọma jijiji Lisbon mebiri emebi n'ihi na ọ fụrụ ọkụ mgbe ndị France hapụrụ. Ma ọ na-anọgide na-eguzo ma anyị nwere ike ịhụ ụlọ mkpọrọ ochie.
Almonaster na Real
Ndị a bi na Sierra de Aracena na Picos de Aroche Natural Park. N'akụkụ kachasị elu, anyị ga-ahụ ogige nke nwere mgbidi ebe foduru nke ụka Visigoth, ụlọ alakụba na ebe ewusiri ike ndị Kraịst. Mosquelọ alakụba bụ ụlọ alakụba kachasị mkpa na mpaghara ahụ ma chekwaa nke ọma. Ije ije site na obodo Almonaster la Real anyị nwere ike ịhụ ụka nke San Martín n'ụdị Gothic Mudejar nke nwere ọnụ ụzọ ịmata ihe dị n'ụdị Manueline nke na-echetara anyị ihe ncheta nke Portugal.
Doñana ogige ntụrụndụ
Ihe ịrụ ụka adịghị ya na nke a bụ otu n'ime nleta ndị ekwesịrị ịme. Ga-arara otu ụbọchị iji hụ ogige ahụ na omimi. Enwere ike ịme ya n'onwe gị kamakwa n'ime njegharị na-eduzi nke a na-atụ aro ya nke ukwuu ka o wee ghara ileghara isi ihe ọ bụla anya. Nleta a na-aga site na ebe ndị ọbịa dị iche iche ebe anyị nwere ike ịhụ ebe a na-ekiri nnụnụ ma ọ bụ na-aga n'okporo ụzọ nke ga-atọ gị ụtọ ọdịdị nke ogige ahụ. Anyị nwekwara ike ịhụ Palacio del Acebrón, ụlọ ụlọ ochie nke taa bụ ebe ngosi.
Punta Umbría bụ otu n’ime obodo ndị dị n’akụkụ osimiri na Huelva nke ghọrọ ezigbo ebe njem nleta. Nnukwu mma ya bụ osimiri dị ka Canaleta Beach ma ọ bụ Punta Umbría Beach. Na Calle Ancha anyị nwere ike ịnụ ụtọ Ogwe na ụlọ ahịa, ịbụ otu n'ime ndị kacha dịrị ndụ. N'ime obodo a anyị nwekwara ike ịhụ Torre Umbría, ebe ochie bastion iji chebe ọgụ mwakpo site n'oké osimiri. Anyị ekwesịghị ichefu mpaghara njem na ọdụ ụgbọ mmiri, ebe anyị nwere ike ịnụ ụtọ gastronomy bara ụba nke obodo ahụ.
Moguer mara maka ịbụ ala nke Juan Ramón Jiménez ya mere otu n’ime ihe mbụ anyị kwesịrị ime bụ ịga na Zenobia na JR Jiménez, ebe a na-ahụkarị ụlọ ndị Andalus. N'okporo ámá nke dị n'akụkụ osimiri bụ ebe a mụrụ onye edemede ma ghọọ ụlọ ihe ngosi nka. Na mgbakwunye, gburugburu obodo ahụ, anyị nwere ike ịchọta ihe ọkpụkpụ a raara nye ọrụ nke platero na I.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Huelva » Ihe ị ga-ahụ na Huelva
Ihe ebube asaa nke .wa
Transylvania, ala nke amara na ihe omimi